Geeddi iyo Waraysigii oo siiyey RADIO AL FURQAAN ka dib maxaa qabsaday!! | Voice Of Somalia
Geeddi iyo Waraysigii oo siiyey RADIO AL FURQAAN ka dib maxaa qabsaday!!
Posted on July 20, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Waatii toddobaadkii hore Cali Maxamed Geeddi waraysi siiyey idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan. Geeddi waraysigaas wuxuu ku bixiyey siro iyo in xukuumadda Xasan Gurguurte loo tashanayo! Waxaa is-weydiin leh: maxaa faraqa oo u dhaxeeya hadduu waraysi siiyo idaacad Islaami ah ama mid gaali ah? Sida caadada ah, marka laga hadlayo mabda’ iyo siyaasad waa in qofku wixiisa caddeystaa! Ma dhicin sir shakhsi ah oo laga sheegay! Waa waraysi uu khiyaar ku bixiyey! Maxaa keenay calaacalka? Waxay u dhowdahay in lagu canaantay oo la yiri: kollay haddaad waraysi bixineysid maxaad u siineysaa idaacadaha Islaamiga ah!
Taariikhda Geeddi waa wax qoran oo Muuqaalkeedii iyo Codkeedii la hayo, uma baahno Faallo dheer in laga qoro, waxaa intaas dheer waatuu Waraysigii laga qaaday uu ku sheegay oo uu lahaa Xasuuq lama yiraahdo xasuuqii Muqdisho kadhacay, inta Culimadii Ilaahay Masaajidda Itoobiyaan ku gowraceen Hooyooyinkii Bakaaraha joogayna Madaafiiq lagu xasuuqay!.
Geeddi Oo Diyaaradaha Itoobiya Muqdisho Qarkeeda Ay Geeyeen!.
This entry was posted in Ethopia, Maleeshiyaadka ALPHA GROUP, Maleeshiyaadka Dowladda, Maleeshiyo Beeleed, Somali Media, Somalia, Taxanaha Taariikhda, Voice Of Somalia, Xabashida, Xasan Gurguurte, Xasuuqa Amisom, Xasuuqa Kenya, Xasuuqa Maleeshiyo Beeleedka, Xasuuqa Xabashida and tagged Banaadir Post, News From Somalia, Voice Of Somalia, Xasan Gurguurte, Xasuuqa Amisom, Xasuuqa Kenya, Xasuuqa Maleeshiyo Beeleedka, Xasuuqa Xabashida. Bookmark the permalink.
WARBIXIN:-Xijaabku Wuxuu Daawo u yahay Cudurro Badan.
Uhuru Kenyata oo Afur u sameeyay Culumo garab taagan!!